Ama-cheekbones aqoshiwe, ikhala elihle, amehlo a-alimondi, izindebe ezikhukhumezayo - yiyiphi intombazane engafuni ukubukeka kanjalo? Ngisho noma izici zakho zikude nokupheleleka, ukuzulazula okulula kuzokusiza. Le nqubo yokukhanya ayikuthathi isikhathi esiningi, kodwa izofeza ngokushesha umphumela oyifunayo.
Khetha i-corrector efanele
Kubalulekile ukukhumbula: umdwebi usho ukulingisa izithunzi ebusweni - yingakho umthunzi wayo akufanele ube ngumuntu ongokwemvelo. Gwema imikhiqizo nge-podton ebomvu noma ebomvu ehlukile: le pigment izobonakala kakhulu esikhumbeni. Umbala we-Corrector gray-brown (taup) ungacatshangwa yonke indawo: ngokushintsha ubuningi be-pigment, ungathola izithunzi ezicacile noma ezibucayi. Ukugcoba kubalulekile: ama-cream stick, amashons kanye nama-pallets enza kube lula ukugqoka izingubo eziyinkimbinkimbi, ama-puddles - kulula ukuthunjwa nokulungele kangcono isikhumba samafutha.
Khetha izinkambu zokulungisa
Ungalandeli ngokuyimpumputhe uhlelo olujwayelekile - ubuso bakho buyingqayizivele futhi kudinga indlela engacabangayo. Khumbula umgomo oyinhloko wokuqeda ukukhanya: i-corrector emnyama ihambela lezo zindawo ezidinga ukubonakala zifihliwe noma zenziwe kancane. Ngakho-ke, udinga ukuchaza imisebenzi yakho yokwenza uphinde udale "imephu yokuphambana" yakho.
Uma ukhetha ukwakheka kwemvelo, sebenzisa i-corrector phambi kwesisekelo ngemuva kokusebenzisa i-primer. Le ndlela isebenza ngempela: ukuguqulwa njengesisekelo kuzolungisa izici zobuso, kodwa ngeke kubonakale kwabanye. Uma wenza imali eningi kakhulu noma ungaphuthelwa ngezindawo ezikhethiwe - nje ukuyinciphisa ngokucophelela nge siponji elimanzi, bese ufaka amanzi amancane.
Isithombe: pinterest.com/kristaminas, pinterest.com/fuzebranding
Makeup - ukwakheka izifundo, usuku nosuku ukwakheka
Lungisa ukwakheka kokusa
Izinguqulo ezingu-3 zoMcimbi Wonyaka Omusha nemicibisholo: khetha okungcono kakhulu!
I-tattoo ye-eyebrow: uhlobo luni lokukhetha kakhulu
USergei Lazarev wenza umkhosi wama-gay eStockholm, ividiyo
I-Mango ne-lime cocktail
Indlela yokwenza i-rocket ngezandla zakho - kusuka ephepheni, emakhadibhodi, emabhodleleni, emidlalweni, ama-foil, ama-master classes - Ukwenza imodeli endizayo ye-rocket yesikhala kusuka ezintweni ezifakiwe
SMS-isimemezelo sothando ngosuku lwabo bonke abathandi February 14
Sandwich nge isaladi leqanda
Yini okufanele ugqoke ngomshado womngane?
Indlela yokuziphatha kumyeni nomfazi okhulelwe
Ukusetshenziswa kwe-quinoa emithi yokwelapha
I-Vitamin isiphuzo nge-apula nesinamoni